Global Voices teny Malagasy » Aostralia: Mitaky Ny Zo Amin’ny Fampinonona Zaza Eny Imasom-bahoaka Ireo Mpomba Ny Fampinonoan-dreny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Febroary 2013 6:31 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rennie Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Oseania, Aostralia, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Any Aostralia, naka ireo filazam-baovao sy ny arabe ireo mpomba ny fampinonoan-dreny mba hiarovana ny zo fahafahana mampinono ny zaza eny imasom-bahoaka. Fihetsiketsehana indroa miantaona no natao taorian'ny fandroahana an-dRamatoa Liana Webster, reny iray nampinono taminà toerana misy dobo filomanosana ho an'ny daholobe, ny 12 Janoary 2013. Araka ny nitateran'ny filazam-baovao ao an-toerana  azy:
Nahazo ny fihainoan'ny Televiziona nasionaly ny hetsika faharoa taorian'ireo tsikera  nataon'ny mpanolotra fandaharana maraina:
Azonao jerena eto  ireo teboka niaingana amin'ny Seven Sunrise. Azo refesina amin'ny hetsika hita ao amin'ny facebook Sunrise Nurse-in  ny fanohanana an-tserasera ataon'ireo mpomba ny fampinonoan-dreny eny imasom-bahoaka, ary anankiray hafa ihany koa noforonon'i Liana Webster Ny zon'ny reny mampinono – na rahoviana na rahoviana, na aiza na aiza, ary amin'ny fomba rehetra . Nanazava  ny Sunrise Nurse-in fa tsy valifaty akory ilay fanoherana:
Nanolotra famintinana tsara ilay olana ny The Little Leaf  , taorian'ny antson'i Kochie mba “hipirimpirina kokoa”. Toy izao no fijeriny:
Ny 21 Janoary, nampakatra lahatsary  nampiseho ny resadresaka tamin'i Amy Ahearn, vehivavy iray mpomba ny fampinonoan-dreny, ny Seven Sunrise, raha naka toerana tao ivelany kosa ny Nurse-in. Efa nihoatra ny 2.200 ny tsikera iny tolakandro iny. Ity tsikera ity sy ireo hafa mitovy amin'izao dia mampiseho fa tsy mandeha ila ny adihevitra:
Tena mavitrika tokoa amin'ny fanohanana an'i Liana Webster ny Fikambanana Destroy the Joint  manohitra ny fanavakavahana ara-pananahana. Ny tanjon'izy ireo: ‘ity pejy ity dia natao ho an'ireo olona mararin'ny fanavakavahana ara-pananahana atao amin'ireo vehivavy ao Aostralia”, ‘na Praiministrantsika izy na vehivavy hafa’. Nanamboatra sary natambatra iray izy ireo misy ny sarin'ireo mpanohana marobe ny fampinonoan-dreny, izay nahazo “tiako” eo ho eo amin'ny arivo hatreto.
Mia Freedom, mpamoaka lahatsoratra ao amin'ilay tranonkala malaza ho an'ny vehivavy, Mamamia , mandrisika ny olona hanatrika ny Nurse-in.
Nameno ny Twitter ihany koa ilay adihevitra. Andramo ity tenifototra ity #kochie  mba ahazoana ny tsirony rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/02/08/44917/
 filazam-baovao ao an-toerana: http://www.sunshinecoastdaily.com.au/news/breastfeeding-mums-air-their-grievances/1723806/
 Ny zon'ny reny mampinono – na rahoviana na rahoviana, na aiza na aiza, ary amin'ny fomba rehetra: https://www.facebook.com/SupportPublicBreastfeedingItsOnlyNatural